Nitrifana Tamin’ny Fanamby An-Tserasera Fonona Ranom-boakazo Iray Ny Antoko Mpanohitra Ao Ghana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2016 8:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, عربي, 日本語, Français, English
Firenena Afrikana somary milamina i Ghana, indrindra rehefa hoavy ny vanim-potoanan'ny fifidianana. Nahita fomba hamindràna ny fahefana am-pilaminana ireo mpanao politika eto. Fantatra ihany koa fa mailaka ireo Ghaneana manoloana ny olana ara-tsosialy sy ara-politika, mahita zavatra mahatsikaiky amin'ny ankamaroan-javatra tsy ahitan'ny hafa izany.
Vao haingana izao, nisy tsikera nahazo ny lohany ao amin'ny fanoherana, Nana Akuffo Addo, kandidà ho filoham-pirenena nalaina baraka tamin'ny fampielezana ny sariny misotro ranom-boankazo tamin'ny baoritra Kalyppo izay zava-pisotro malaza amin'ny kilonga mpianatra.
Nizara ny sary an-tserasera i Chris Vincent, mpisera Twitter, niezaka ny namazivazy an'i Addo noho ny safidin-java-pisotro:
Te Handray Anjara Amin'ny #FanambyKalypo? – Sarin'i Nana Addo Nisotro Ranom-boankazo Niteraka Ny Lamaody Farany Tao Amin'ny Media Sosialy https://t.co/M42zylmsiB pic.twitter.com/Y0l0AeAd8V
Nifototra ny ezaka fanalam-baraka, na izany aza, tamin'ny namadihan'ny mpanohana an'i Addo azy io ho fanamby nalaza be: ny #FanambyKalypo (soratana amin'ny litera “p” iray fa tsy mitovy amin'ny tena anaran'ny marika ), izay ahitana ireo mpisera aterineto maka sary ny tenany miaraka amin'ny baoritra fonon-dranom-boankazo Kalyppo sy ny entana hafa vita avy ao an-toerana .
Gaga tamin'ny fomba nahavitan'ny mpanohana an'i Addo nanitan-kevitra tamin'ny sarin'ny baoritra ranom-boankazo ilay mpanao gazety Umaru Sanda ao amin'ny fampielezam-peo ao an-toerana CitiFM vao haingana:
Tiavo hatrany izany rehefa mamadika ny “fahavoazany” ho fahombiazana lehibe ny olona . Izany no nataon'ny #NPP tamin'ny #FanambyKalypo. Fahamatorana
Nanome aingam-panahy tamin'ny fahaiza-mamorona ny fanitaran-kevitra ihany koa ilay fanamby an-tserasera. Nizara izao fanitaran-kevitra manaraka izao tamin'ny alàlan'ny fanaovana selfie tamn'ny baoritra ranom-boankazo i Mainprince Essuman:
Nahasarika olona maro ny fanamby an-tserasera anisan'izany ny iray amin'ireo mpilalao mozika malaza ao Ghana, A Plus. Nandefa ny sariny mihazona ny ranom-boankazo Kalyppo izy sady mitsako hena:
Manasongadina tovolahy iray manao hira gospel avy ao an-toerana sady mampiasa ny teny hoe Kalyppo ao amin'ny tononkira ny iray amin'ireo valinteny malaza indrindra tamin'ny FanambyKalypo:
Nisaotra ireo Ghaneana noho ny fanohanana tao amin'ny pejiny Facebook ny mpamorona ny ranom-boankazo Kalyppo:
Nanararaotra ny fotoana ny bilaogera sasany mba hanabeazana ireo mpitantana ny media sosialy mikasika ny fomba famoronana ny fanentanana ao amin'ny media sosialy toy ny #FanambyKalypo. Nanamarika i JB Klutse tao amin'ny bilaoginy hoe :
Noho izany, amin'ny maha manam-pahaizana manokana /tetikady momba ny haivarotra ao amin'ny media sosialy, dia tsy maintsy miezaka mitady sy manohana ireo antony lehibe ambadiky ny fanentanana izay ataontsika isika. Lasa lavitra ny fitadiavana ny tanjona tsara hanohanana ny vokatra hanerena ireo mpijery mba hividy izany. Ohatra: raha manakaiky ny fifidianana, mahatonga ny filaminana ny fanampianao ny orinasa madinika amin'ny fampiroboroboana ny vokatra.
Nanamarika ny fomba nahavitan'ny mpanohana an'i Addo ny nanatsimbadihana ity zavatra mahatsikaiky ity ilay bilaogera Ameyaw Debrah :
Ny ranom-boankazo fisotro Kalypo no tena entam-barotra malaza indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao! Feno sarin'ny olona mizara ireo sarin'ny fotoana Kalypo taorian'ny fisalorana ny sain'ny Antoko Tia Tanindrazana Vaovao (NPP) ny tontolon'ny media sosialy Ghana, nalaina sary nisotro ny Kalypo i Nana Akufo Addo. Na dia maro aza ny mino fa navoaka ny sary tamin'ny voalohany mba hanaovana fihomehezana ny mpitarika NPP dia nahomby tamin'ny fanohanana ny tohan-kevitra ireo mpanara-dia azy fa nanao fampiroboroboana vokatra tao an-toerana tamin'ny alàlan'ny fisotroana kely ny ranom-boankazo ilay Lehiben'ny Fampanoavana teo aloha.
Nanamarika i Jemila Abdulai, iray amin'ireo vehivavy bilaogera mpitarika ao Ghana fa ilaina ny mampiroborobo ny entana vita avy ao Ghana amin'ny alàlan'ny media sosialy:
Alaivo sary an-tsaina ny zavatra azontsika atao amin'ny #VitaetoGhana raha izany fientanentanana rehetra izany no afaka noforonina manodidina ny #FanambyKalypo; lohahevitra iray isam-bolana. #GHLivin
Nampitandrina ny mpitarika ny mpanohitra hifantohany amin'ny fanentanana fa tsy amin'ny #FanambyKalypo i Gavivina Okudzeto, mandritra izany fotoana izany:
Manao fanentanana andro aman'alina ny mpiara-miasa aminao, fa ianao mipetraka ao Accra sy manao #FanambyKalypo. Hitondra vato ho anao ve izany? https://t.co/Rz5NiYjBkN
Mbola nirongatra ny resabe manodidina ny #FanambyKalypo, ahitana ireo olo-malaza eo an-toerana toy ny Filoha teo aloha John Kufour nandray anjara tamin'ny fanalan'andro.